फोटो फिचर | Indrenionline.com | Page 5
भारत र पाकिस्तान विवादमा कलाकार पनि अछुता रहेनन्
(एजेन्सहरु), १६ असोज । भारत र पाकिस्तानबीचको चुलिदै गएको विवादबाट कलाकारहरु पनि अछुता रहेनन् । दुबै देशबीचको विवादकाकारण कलाकारहरु निशानामा परेका छन् । भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेपछि भारतमा पाकिस्तानी कलाकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने यसको बदलास्वरूप पाकिस्तानका चलचित्रघरका सञ्चालकले भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइदिएको छ । गत साता उरीमा भएको आतंकवादी आक्रमण र बिहीबार भारत(पाकिस्तानबीच गोला हानाहान भएपछि भारतले ...
प्रीतिले चुमिन ‘मिस मंगोल’को ताज
काठमाडौं । यस वर्षको मंगोल नेपालको ताज प्रीति गुरुङले जितेकिछिन् । मिस मंगोल नेपाल–२०१६’ को ताज गुरुङले चुमेकी हुन् । सम्पन्न प्रतियोगितामा प्रीतिले उपाधिसँगै एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार हात पारिन् । उनले मिस पब्लिक च्वाइसको उपाधीसमेत हात पार्न सफल भएकी छिन् । प्रतियोगितामा २५ युवती अन्तिम प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए । धनकुटाकी बरुना राई र दैलेखकी योजना थापामगर क्रमशः फस्ट रनरअप ...
कति कमाउँछन् नेपाली अभिनेत्री ?
पछिल्ला केही वर्षयता कलाकारहरू निकै व्यावसायिक भएका छन् । नेपाली फिल्म, संगीतप्रति दर्शकस्रोताको बढ्दो आकर्षणसँगै यस क्षेत्रमै करिअर बनाउने नवयुवायुवती पनि बग्रेल्ती छन् । फिल्म अभिनय, म्युजिक भिडियो, टेलिविज्ञापन मात्र होइन, स्वदेशविदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि कलाकारको माग बढ्दो छ । जसबाट कलाकर्मीले बग्रेल्ती आम्दानी गर्ने गर्दछन् । सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुरुष कलाकारभन्दा महिला कलाकारको बढी माग हुने र आम्दानी पनि ...
को–को भए मिस नेपाल आइकन र टिचर आइकन सौन्दर्य प्रतियोगिताका विजेता
काठमाडौं, १२ असोज । एएनपी मिडिया हाउसले एकसाथ एकै मञ्चमा यसवर्षका दुई सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेपाल आइकन २०१६ र टिचर आइकन अफ दि इयर २०१६ राष्ट्रिय नाचघर, जमलमा सम्पन्न ग¥यो । आयोजित मिस नेपाल आइकन–२०१६ तर्फ १६ जना सहभागीहरु विभिन्न उपाधि जिते । सुष्मीता पाण्डे मिस नेपाल आइकन २०१६ का साथै बेष्ट पर्शनालिटि घोषित भइन । त्यस्तै त्रिश्ना श्रेष्ठ फस्ट ...
बिबिएको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै भोक्टोरिया इन्टरनेशनल कलेज
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, ९ असोज । हामी धेरैको गुनासो हो नेपालको शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक र व्यवसायिक छैन । त्यसै कारणले यो शिक्षा हासिल गरेका धेरै व्यक्ति÷जनसक्ति वेरोजगार छन् । रोजगारी पाएका पनि स्वदेशमा कमैछन् वढी विदेशी भूमिमा छन् । यो हाम्रो गुनासो कही रुपमा सत्य पनि होला । तर, यही गुनासाका विचमा राप्तीको एक मात्र बीबीए कलेज घोराहीको भिक्टोरिया इन्टरनेशनल ...
थारु चलचित्र ‘झुम्की’ राजधानीमा प्रदर्शन
काठमाडौं, ७ असोज । थारु समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक जनजीवनमा आधारित चलचित्र ‘झुम्की’ आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । अपिल विष्टले पहिलोपल्ट निर्देशन चलचित्र ‘झुम्की’ मा द्वन्द्वकालको अवस्थालाई समेटिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । नारीलाई प्रधानता दिएर चलचित्र बनाइएको समेत निर्माण पक्षले बतायो । निर्देशक विष्टको लगानी रहेको सो चलचित्र सिनेमा आर्टस्को ब्यानरमा बनेको हो । रामबाबु गुरुङले थारुका विषयमा ...
एफएम रेडियोमा डोजर लागेपछि…
धादिङ, ७ असोज । जंगल अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको आरोपमा जिल्ला वन कार्यालयले एकाबिहानै स्थानीय धादिङ सामुदायिक रेडियो धादिङमा डोजर प्रयोग गरेर भत्काएको छ । सशस्त्र वन रक्षकहरुले रेडियो स्टेशनमै सुतेका रेडियोकर्मीहरुलाई बाहिर घिसारेर रेडियोको उपकरणहरु पनि तोडफेड गरेका छन् । रेडियो धादिङका कार्यक्रम प्रस्तोता शंकर श्रेष्ठ र दोलख गुरुङ्ग लगायत ४ जना रेडियो स्टेशनमै सुत्दै आएका थिए । रेडियोकर्मीहरुलाई ...
कति आकासियो राजधानीमा तरकारीको भाउ ?
काठमाडौं, ७ असोज । चाडपर्वको मुखैमा आएर राजधानीमा तरकारीको मुल्य आकाशिएको छ । तरकारीको भाउ साढे ३ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ । गत वर्षको तुलनमा तरकारी आयात कमी आएको भन्दै मूल्यवृद्धि भएको तरकारी व्यापारीहरुले बताएका छन् । गत वर्ष प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ थोक मूल्य पर्ने घ्यू सिमी अहिले ३ सय ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ ...
अनुपले जितिन मिसेस नेपाल इन्टरनेशल २०१६ को उपाधी
काठमाडौं, ६ असोज । मिसेस नेपाल इन्टरनेशल २०१६ को उपाधी अनुपमा रार्ईले जितेकी छिन् । रिवन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको आयोजनामा भएको मिसेस नेपाल इन्टरनेशल २०१६ दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिताको उपाधी अनुपमा राईले जितेकी हुन् । करीब ४५ दिन लामो प्रशिक्षणपछि भद्रकालिस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा अयोजित प्रतियोगितामा राईले ३९ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै बेस्ट पर्शनालिटी उप–उपाधी समेत आफनो पोल्टामा पारेकी छिन् । प्रतियोगितामा ...